Guddigii loo xil saaray baarista eedeynta kufsiga oo maanta howlgalay
Muqdisho, August 17,2013-----Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon “Saacid”, ayaa magacaabay 15-kii bishan laba guddi oo heer wasiir iyo mid farsamo ah kuwaas oo soo baara eedeynta la xariirta fal kufsi ah oo lagula kacay gabar Soomaaliyeed.
Guddigan oo ay madax u tahay Wasiirka Adeega Bulshada Drs. Maryam Khaasim Axmed ayna xubno ka yihiin Wasiiro iyo saraakiil ciidan ayaa saaka guda galay howshii baarista ee la xariirtay falkan, waxayna booqdeen xarun ay ku sugantahay gabadhan, waxaana si gaar ah xog wareysi ula yeeshay gabadha Drs. Maryam Khaasim oo guddiga horkaceysay.
Hooyo Amran oo Sheegtey in Ciidamo ku Labisan Dareyska Dowladda ay Xoog ku Kaxaysteen, islamarkaana lageeyey oo lagu Kufsadey Xero ay Degen yihiin Ciidamada AMISOM
(Dhacdo Xanuun Badan)
Hooyo leh Afar Caruur oo mid ay Nuujineyso Magaceeda ku sheegtey Amran ayaa iyadoo oo Miyir La’ waxaa la keeney Isbitaalka Xayaad ee Magaalada Muqdisho ka dib markii Ciidamo ku labisan Dareyska Ciidamada oo ku sugnaa Agagaarka Isbitaalka SOS ay Joojiyeen maalinkii Koowaad ee Ciidul Fidriga markii lagu Amrey in ay qaado Niqaabka ama Indha Shareerka , markii ay iska qaadey ayaa lagu yiri waxaa laguu qabaa Dacwad ee waa in aad Ciidamadaan raacdaa,hase yeeshee Amran waa ay diidey , waxaana Xoog lagu saarey Gaari oo ay sheegety in markiii la saarayey Indhaha laga Xirey si aysan u ogaan halka loo wado.
Shir jaraa’id oo ay warbaahinta ugu qabatay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Drs. Maryam Khaasim kadib booqashada gabadha ayay ku sheegtay in guddigu saaka booqday gabadha dhibanaha ah ayna la kulmeen, waxayna xustay in ay weli sii wadi doonaan baaritaanadooda, warbixin buuxdana ay u soo bandhigi doonaan warbaahinta marka ay soo gabagabeeyaan.
“Wax talaabo ah lama qaadi karo iyada oon la helin xog rasmi ah iyo cadeymo, sidaasi darteed, weli waxaan ku jirnaa uruurinta xogtaas, waxaana idiin xaqiijineynaa marka la soo gabagabeeyo xog uruurintan in cid kasta oo ku lug yeelata loo cuskam doono sharciga meesha ugu sareysa” ayay tiri Drs. Maryam Khaasim.
Dhanka kale, Drs. Maryam Khaasim ayaa beenisay warbixinada sheegaya in 10-kii haween ah ee Soomaaliyeed 9 ka mid ah la faraxumeeyey, waxayna xustay in ay tahay ka badbadis iyo been abuur “Arrintan waa buun buunis iyo ka badbadis, ragii Soomaaliyeed ee sharafta iyo haybada lagu yaqiinay iyo ciidamadii qalabka siday ee wadanka u taagnaa in illaa heerkaas la gaarsiiyo been abuur intaas la eg uma dul qaadan doono.
Guddigan, ayaa ugu dambeyntiina kulan gaar ah la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdi Faarax Shirdoon iyaga oo uga warbixiyay howlaha guddiga iyo halka ay wax u marayaan.
## DHAMMAAD ###
Afhayeenka Guud ee Xarakada Shabaab oo ka Hadlay Fal Kufsi ah oo Xerada Maslax loogu Geystey Gabar Soomaaliyeed
Afhayeenka Guud ee xarakada Shabaab Cali Dheere oo ka hadlay warbaahinta ku hadasha Afka Xarakadaas ayaa ka hadlay Kufsi uu sheegay in dhawaan loo gaystay Gabar Soomaaliyeed oo sida la sheegay Kufsi loogu gaystay Xerada Maslax ee Duleedka magaalada Muqdisho.
Afhayeenka ayaa intaa ku daray inaysan arrintaa ka hari doonin isla markaana ay u Aari doonaan Gabdhaas Soomaaliyeed ee Kufsiga ay u gaysteen Ciidamada Amisom.Af hayeenka ayaa ugu Niyad qaboojiyay Gabadhaas in ay iska sabirto maalin ay noqotana ay u aar gudi doonaan sidii hadda ka horba ay ugu Aar Gudeen gHaween Soomaaliyeed oo Kufsi loo gaystay.
Sheikh Cali Maxamuud Raage Afhayeenka Xarakada Shabaab ayaa ugu baaqay Shacabka Soomaaliyeed in aysan ogolaanin in Haweenka Sharafta leh ee Soomaaliyeed Sharaftooda meel looga dhaco isla markaana ay la dagaalamaan Ciidamada Amisom oo uu sheegay inaysan iyagu Dalkan lahayn.
Afhayeenka ayaa intaa ku daray in maalin maalmaha ka mid ah ay soo noqon doonto Sharaftii iyo Karaamadii Haweenka Soomaaliyeed isla markaana aysan dhici doonin wax Kufsi ah oo loo gaysto Haweenka Soomaaliyeed.
Hadalkan afhayeenka ayaa imaanaya xilli dhawaan Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ay si kulul uga hadashay Haweeney Soomaaliyeed oo la sheegay in Ciidamada Amisom ay ku Kufsadeen Xerada Maslax ee Duleedka Magaalada Muqdisho.